नवनियुक्त मन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ सोमबार, असार २०, २०७९
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषय छानबिन हुनुपर्छ : एमाले अध्यक्ष ओली सोमबार, असार २०, २०७९
छानविन समितिको निष्कर्ष : राज्यमन्त्री बिमला वली दोषी शनिबार, असार १८, २०७९
एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिष्कार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ । शुक्रबार, असार १७, २०७९
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा भएको थियो । शुक्रबार, असार १७, २०७९
आफ्नो भूभाग फिर्ता चाहियो भन्नु जायजः ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भूभाग फिर्ता चाहियो भन्नु जायज भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार, असार ७, २०७९
एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन ८ माघमा नेपालगन्जमा हुने, २८ पुसभित्र प्रतिनिधि चयन गर्न निर्देशन नेकपा (एमाले)ले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अधिवेशन आगामी ८ माघमा बाँकेको नेपालगन्जमा आयाेजना गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको दाङमा बसेको बैठकले प्रदेश अधिवेशनको मिति तय गरेको हो । मंगलबार, पुस ६, २०७८
नेपालको जमिन बाँझो राखेर भारतलाई पानी दिन सकिँदैन: केपी ओली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकार निकम्मा रहेको बताएका छन् । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका–८ बहादुरगन्जमा जसपा केन्द्रीय सदस्य मंगल प्रसाद गुप्तालाई प्रवेश गराउँदै कम्युनिष्ट सरकार ढालेर निकम्मा सरकार गठन गरेको टिप्पणी गरे । मंगलबार, पुस ६, २०७८
यी हुन् खुला केन्द्रीय सदस्यमा पराजित ६४ नेता, कसले कति मत पाए ? (सूचीसहित) नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत खुला केन्द्रीय सदस्यमा ६४ जना नेता पराजित भएका छन् । कुल ९९ उम्मेदवारमध्ये ३५ जना निर्वाचित भए भने ६४ जना पराजित हुँदै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए । पराजित उम्मेदवारहरुले साढे १६ सयदेखि एक सयसम्म मत पाएका छन् । सोमबार, पुस ५, २०७८
कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा महिलातर्फ उपाध्याय निर्वाचित कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा महिलातर्फ महालक्ष्मी उपाध्याय डिना निर्वाचित भएकी छन् । प्रतिद्वन्द्वी कमला पन्तलाई ४२८ मतान्तरले हराउँदै उपाध्याय निर्वाचित भएकी हुन् । बिहीबार, पुस १, २०७८
लुम्बिनी प्रदेश: स्थायी संरचना नबन्दै मन्त्रालय दाङमा सार्न हतारो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी संरचना नबन्दै मन्त्रालयहरू स्थायी राजधानी दाङ सार्न थालेको छ। बुटवलमा रहेको अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेका मन्त्रालय दाङका अस्थायी संरचनामै सार्न थालिएको हो। बिहीबार, पुस १, २०७८
उम्मेदवारी दिँदा एउटा समूहबाट थिएँ, अब सबैको महामन्त्री भएँ: गगन थापा नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले आफू कुनै एक समूहको महामन्त्री नभएर सबैको महामन्त्री भएको बताएका छन् । बिहीबार, पुस १, २०७८
चुनाब हारेपछि सक्रिय राजनीतिबाटै सन्यास लिनसक्ने मिनेन्द्र रिजालको संकेत काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सक्रिय राजनीति बाटै सन्यास लिन सक्ने संकेत गरेका छन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले राजनीतिबाटै बाहिरिन सक्ने बताएका हुन् । बिहीबार, पुस १, २०७८
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदाता र मतदान स्थल कायम, लुम्बिनीको दाङमा निर्वाचन आयोगले आगामी माघ १२ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार, पुस १, २०७८
कांग्रेस महामन्त्रीमा तीन डाक्टर पराजित कांग्रेस महामन्त्रीमा तीन डाक्टर पराजित भएका छन् । दुई महामन्त्रीका लागि २७ मंसिरमा भएको निर्वाचनको बिहीबार सार्वजनिक परिणामअनुसार तीन डाक्टर उम्मेदवार पराजित भएका हुन् । बिहीबार, पुस १, २०७८
माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराललाई बनाउने सहमति नेकपा माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश समिति अध्यक्षमा सुदर्शन बराललाई ल्याउने सहमति भएको छ । सम्मेलन सकिएको चार दिनपछि बिहीबार दिउँसो बराललाई अध्यक्ष बनाउन सर्वसम्मत सहमति जुटेको माओवादी प्रदेश कमिटी सदस्य बुद्धि जिसीले जानकारी दिए । बिहीबार, पुस १, २०७८
कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी, कसले कति मत ल्याए ? नेपाली कांग्रेस महामन्त्रीमा गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएको औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ । २७ मंसिरमा दुई महामन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा थापा र शर्मा विजयी भएको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । बिहीबार, पुस १, २०७८
प्रचण्डले भने- ओली, झुट, बेइमानी र धोकाको अर्को नाम हो, ज्ञानेन्द्रसँग पाँच बुँदे सम्झाैता प्रमाणित गर्न चुनाैती नेकपा (माओवादी)केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएका आराेप प्रमाणित गर्न चुनाैति दिएका छन् । बिहीबार, पुस १, २०७८
महरा र वर्षमानकाे अडानले माओवादी लुम्बिनीमा नेतृत्व छान्न सकस, आफ्ना मान्छे राख्न दुवैको अडान नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई नेताकाे स्वार्थ बाँझिदा सम्मेलन सकिएको चार दिनसम्म पनि लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व टुंगो लाग्न सकेकाे छैन । बिहीबार, पुस १, २०७८
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान निर्वाचन आयोगले १२ माघमा तय भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि १० पुससम्म आयोगमा निवेदन दिएर दल दर्ता गर्न भनिएको हो। बिहीबार, पुस १, २०७८
कांग्रेस उपसभापतिमा पूर्ण खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित, झिनो मतले चुके गच्छदार नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । बुधबार राति केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न मतगणनामा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट खड्का र शेखर कोइराला समूहबाट गुरुङ निर्वाचित भएका हुन् । बिहीबार, पुस १, २०७८
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सर्‍यो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ । बुधबार राप्ती उपत्यकाको सिसहनियामा स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले मन्त्रालय उद्घाटन गरी सेवा सुरु गराएका हुन् । बुधबार, मंसिर २९, २०७८
कांग्रेस महाधिवेशन: पदाधिकारीकाे मतगणना आजदेखि नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना आज बुधबारबाट सुरु हुने भएको छ । बुधबार, मंसिर २९, २०७८
कांग्रेस सभापतिमा पुन: देउवा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी भएका छन्। कुल खसेको चार हजार ६२३ मतमा सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले २७३३ मत प्राप्त गरेका छन् । बुधबार, मंसिर २९, २०७८
शेखरबाहेक सभापतिका सबै उम्मेदवारको समर्थन देउवालाई नेपाली कांग्रेसका सभापतिको दोस्रो चरणको मतदानमा सभापतिका प्रत्यासी कल्याणकुमार गुरुङले पनि सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भएका छन् । मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
एमाले सांसदको नाराबाजी चलिरहँदा संसदमा ६ अध्यादेश पेस सरकारले संसदमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश संसद् बैठकमा पेस गरेको छ । आफ्नाे पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसदको नवौँ अधिवेशनका सबै बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए । मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
निधिलाई भेट्न देउवा पुगे निवास, मागे सहयोग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई भेट्न उनको निवास पुगेका छन् । केही समयअघि मात्रै दुवै नेताबीच भेट भएको हो । मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
देउवालाई प्रकाशमानको समर्थन नेपाली कांग्रेसको सभापतिको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भएका छन् । मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
माओवादी केन्द्र लुम्बिनीको सम्मेलन सकिँदा पनि नेतृत्व किन टुंगो लागेन ? नेकपा (माओवादी केन्द्र)को लुम्बिनी प्रदेशकाे सम्मेलन सकिए पनि अझै नयाँ नेतृत्वको टुंगो लाग्न सकेकाे छैन । २५३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीका लागि सम्मेलनले २१७ जनाको नाम टुंगो लगाएको थियो ।तर, बाँकी पदाधिकारीकाे विषयमा सहमति नजुट्दा नयाँ नेतृत्व नै चयन हुन सकेकाे छैन । मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
२७७७ मत गणना हुँदा देउवाले १३१८ मत ल्याए, कसको कति नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सभापतिका लागि पाँच जनाको प्रतिस्पर्धामा रहे पनि प्रारम्भिक मतणनामा देउवालाई कोइराला पछ्छाइरहेका हुन् । मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
माओवादी केन्द्र महोत्तरीको अधिवेशन : कतै विवाद, कतै सर्वसम्मत नेकपा माओवादी केन्द्र महोत्तरीको पालिका र वडा अधिवेशन अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । कतै आका‌ंक्षीहरूबीच विवाद त कतै टोलभेला तथा सेल कमिटी नै नबनेको कारण अधिवेशन समपन्न हुन नसकेको माओवादी केन्द्र महोत्तरीले जनाएको छ । मंगलबार, मंसिर २८, २०७८
काे बन्ला मा‍ओवादी केन्द्रकाे प्रदेश २ अध्यक्ष ? माओवादी केन्द्रको प्रथम प्रदेश २ अधिवेशन शनिबारदेखि जनकपुरधाममा उद्घाटन भए पनि बन्दसत्र भने ३ पुसदेखि सुरु हुने भएको छ । आइतबार, मंसिर २६, २०७८
शैक्षिक क्रियाकलाप अवलोकन गर्न खोटाङ पुगे विप्लव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले खोटाङमा वैकल्पिक शिक्षाको अभ्यास गरिरहेको शुभद्रा-मदन फाउन्डेसनको शैक्षिक क्रियाकलाप अवलोकन गरेका छन् । आइतबार, मंसिर २६, २०७८
1234567 8910 89 90 Next